Semalt Expert: Wordpress Theme Types - Torohevitra Tsara
Ny fanapahan-kevitra momba ny loha-hevitra WordPress dia safidy tsy maintsy ataon'ny olona ho an'ny bilaogy. Ny iray amin'ireo endri-javatra tsara indrindra amin'ny Wordpress dia ny ahafahanao mamorona ilay tranonkala mifototra amin'ny sary sy ny fijerinao ny fomba tianao sy ny fanirianao amin'ny fampidirana plugin plugin. Ny lohahevitra dia hamela ny votoatiny toy izany ihany saingy manova ny endrik'ilay tranonkala sy ny fomba natolotra ny votoaty. Ny karazana hevitra sasantsasany azonao atao dia afaka manova tanteraka ny votoatiny, zavatra izay vitanao amin'ny tsikitsiky iray monja.
Nanazava i Ivan Konovalov, manam-pahaizana matihanina amin'ny Semalt , fa misy karazana Wordpress ahitana karazana: 10)
Ireo lohahevitra navoaka na premium
Ireto ny lohahevitra nividiananao tamin'ny mpivarotra an-tserasera. Manapa-kevitra ny hividy azy ireo amin'ny saram-pandraharahana mandritra ny fotoana fohy ianao na misafidy ny handoa azy amin'ny sehatra isan-taona. Miankina amin'ny mpivarotra, afaka mahazo olona miaraka amin'ny video tutorials izay manazava ny fomba fampiasana azy ireo.
Nahazo tombontsoa be dia be ny lohahevitr'izy ireo, anisan'izany ny:
Nohatsaraina ary manana fahaiza-manao avo lenta
Manolora fanohanana feno
Ampiasain'izy ireo ny teknolojia farany indrindra ary ny fitsipi-tranonkala avo indrindra
Tonga izy ireo miaraka amin'ny safidy maro sy endri-javatra manokana izay mamela anao hanodina ny asan'ny tranokalanao. Ny sasany amin'ireo safidy dia ny manova ny loko ary manova ny fametrahana ny tranokala..Izy ireo no tsara indrindra amin'ny bilaogy tonga lafatra.
Misy karazana lohahevitra maimaim-poana an'arivony ao amin'ny aterineto. Afaka maimaim-poana izy ireo ary afaka mampihatra azy ireo tsy misy famerana. Azonao atao ny mahazo azy ireo amin'ny alàlan'ny fitadidiana ny template Wordpress.org, ary 100% maimaim-poana izy ireo
Maimaim-poana - Midika izany fa mahazo azy ireo ianao nefa tsy manonitra na inona na inona. Ny lohahevitra maimaim-poana dia samy hafa amin'ny freemium satria ny loha-pahaizana malalaka dia hita taratra avy amin'ny dull ka hatramin'ny endrika mahatalanjona.
Freemium - Ireo sehatra ireo dia voafetra amin'ny asa voafetra voafetra izay natao ho an'ny fanandramana any amin'ny farany raha toa ka tianao izy ireo, dia angatahana ianao hividy ny dikan-teny feno. Noho izany, tsy afaka maimaim-poana izy ireo satria tsy maintsy takiana amin'izy ireo amin'ny fotoana.
Izy ireo koa dia antsoina hoe lohahevitry ny mpandrindra. Izany dia satria efa voaomana ny lohahevitra, saingy mila mamboarina ho zavatra tsara kokoa izy ireo.
Ireo lohahevitra ireo dia mifanaraka amin'ny endrika kely. Anisan'izany ny lohahevitra toy ny taolan-damosina, taolana, ary ny fakany izay ahazoan'ny mpandraharaha mandray soa avy amin'izy ireo amin'ny fiezahana hampivoatra azy ireo ho azo antoka sy ara-bola. Ny tanjon'izy ireo dia ny hanomezana ireo mpampiasa vaovao hampifanaraka ny fehezin'ny loha-hevitra, ary azo ekena izy ireny ho an'ireo izay mikasa ny hampivelatra ny lohahevitra.
Ny lohahevitra rehetra dia miavaka, ary izy ireo dia natao mba hifanaraka amin'ny zavatra ilain'ny olona tsirairay. Manaova fikarohana sasantsasany momba ny endriky ny tsirairay alohan'ny handraisana fanapahan-kevitra momba ny foto-kevitra ampiasaina amin'ny blôginao Source .